Shirwaynihii Caafimaadka DDSI Oo La Soo Gabagabeeyay. - Cakaara News
Shirwaynihii Caafimaadka DDSI Oo La Soo Gabagabeeyay.
Jigjiga(cakaaranews) Arbaca, 21ka, September, 2016. Waxaa lagu soo gabagabeeyay hoolka shirarka ee Sayid MCX ee magaalada jigjiga shirwaynihii caafimaadka DDSI oo mudo laba maalmood ah, u socday hogaaminta degmooyinka, gobolaa iyo maamul magaalooyinka DDSI.
Shirwaynahan ayaa maanta galinkii hore lagu soo bandhigay qorshihii caafimaadka ee shantii sano ee ugu danbeeyay natiijada ka soo baxday taasi oo diirada lagu saarayay meelaha ay gol-daloolada ka jirtay . Sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay qorshaha isbedalka secterka caafimaadka ee DDSI ee shanta sano ee soo socda oo qaybka ah qorshaha guud ee koboca iyo isbedalka dhaqaalaha wajigiisa labaad ee dalka iyo deegaanka u dajisan waxaana soo bandhigayay qorshahan masuuliyiinta xafiiska caafimaadka oo uu ka mid yahay wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI mudane Xasan Ismaaciil.
Sidoo kale waxay maanta masuuliyiinii ka soo qaybgashay shirkan oo ah hogaaminta gobolada, degmooyinka iyo maamulada magaalooyinka DDSI si koox koox ah uga doodeen tabaha iyo xeeladaha lagu hirgalin lahaa istaraatajiyadaha iyo yoolasha u dajisan secterka caafimaadka shanta sono ee soo socda. Taasi oo sal looga dhigay tiirarka ay ka mid yihiin:- xaqiijinta gaadhsiinta bulshada adeeg caafimaad oo tayo leh loona siman yahay, kobcinta awooda fulineed ee degmooyinka, xaqiijinta iyo isticmaalka xog caafimaad oo sugan iyo xaqiijinta cudud shaqaale oo bixisa daryeel caafimaad oo ku salaysan xushmad, naxariis iyo xilkasnimo.
Waxaana masuuliyiinta xafiiska caafimaadka, hogaaminta degmooyinka, gobolada, maamul magaalooyinka iyo bahwadaagta xafiiska caafimaadku isla qaateen sidii looga midho dhalin lahaa meel marinta iyo hirgalinta istaraatajiyadahaasi iyo qorshayaasi u dajisan sectarka caafimaadak DDSI. waxaana gabagabadii shirwaynahan abaalmarino iyo shahaado sharaf la gudooniiyay degmooyinkii, goboladii maamul magaalooyinka iyo xarumaha caafimaadka ee hormuudka ka galay hirgalinta qorshihii shantii sano ee aan soo dhaafnay.
Shiraynahan ayaa waxaa lagu soo gunaanaday dhirbeerid laga sameeyay cisbitaalka wayn ee Males Sinaawi memorial Referral Hospital ee magaalada jigjiga taasi oo ay dhamaan hogaamintii loo hayay shirkan ka soo qaybgaleen waxayna ku beereen 2000 oo geed barxada wayn ee cisbitaalka.